GURYAHA LOO YAQAAN "GREENHOUSE GREENHOUSE" - XAL CUSUB OO KUU SAHLAN - DHISMAYAASHA
Waxaan isku dhisannahay: aqalka dhirta lagu koriyo ee saqafka furan - faa'iidooyinka, qaababka farsamada, marxaladaha shirarka
Winter waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee ku dhowaad milkiilaha oo dhan aqalka dhirta lagu koriyo. Ka dib oo dhan, waa dhab ah xilli ciyaareedkan sanadka in qaabdhismeedka, taas oo loogu talagalay beerista dalagyo kala duwan, ay la kulmaan "ma ah waqtiyada ugu wanaagsan."
Sidaas qaboojiyaha barafku wuxuu si tartiib tartiib ah u dhistaa saqafka dhismaha, si xun u saameynaya gobolka aqalka dhirta lagu koriyo. Waxaa jira laba siyaabood oo ka mid ah xaaladdan - si loo soo ururiyo loona burburiyo saqafka aqalka dhirta lagu koriyo sanad walba ama sameyso qaab gaar ah iyada oo saqafka la rari karo.
Waa in la ogaadaa in ilaalin lagu kalsoonaan karo oo ka soo horjeeda barkada culus ee barafka iyo barafka ma aha faa'iidada keliya ee noocan ah ee aqalka dhirta lagu koriyo leeyahay.
Geedka aqalka dhirta lagu koriyo - faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee aqalka dhirta lagu koriyo oo leh kore laga saaro kharash yar yar, taas oo ah qiyaastii 5% ka sarraysa kharashka dhismayaasha fudud.
Sidoo kale si ay uusoo bandhigto saqafka aqalka dhirta lagu koriyo oo leh saqaf laga saaro sifooyinka kale ee farsamada waxaa ka mid ah:
Thanks to saqafka la saari karo, barafku wuxuu ku dhacaa gudaha aqalka dhirta lagu koriyosi adag u dabool dhulka. Natiijo ahaan, carrada waxaa laga ilaaliyaa in la qalajiyo oo la nadiifiyo, iyo sidoo kale in la baabi'iyo sheyga faa'iido leh.
Sidaa daraadeed, waxaa suurtagal ah in laga fogaado soo jiidashada sanadlaha ah ee aqalka dhirta lagu koriyo oo ay la socoto ciidda dulinada cusub iyo hababka halista ah ee cudurrada faafa;
Sababta oo ah taas barafka ayaa hoos u dhacaya oo derbiyada dhismaha ma ahan oo kaliya dibadda, laakiin sidoo kale gudaha, waxaa jira isku dheelitirida cadaadiska ugu sarreeya, kaas oo la abuuray iyada oo loo marayo culus ku filan oo ku saabsan maaddada daboolka.
Natiijo ahaan, nolol firfircooni leh ayaa loo ballanqaaday, sababtoo ah lakabyada culus, gaar ahaan barafka qoyan, xitaa qaabka "tayo sare leh" ayaa burburin kara;
Ilaalinta joogtada ah ee kulaylka - Saqafka laqari karo ee aqalka dhirta lagu koriyo leh gacmihiisu waa faa'iido leh, labada qabow iyo xiliga kulaylaha.
Waa bedelka asalka ah ee dareenka caadiga ah. Fududaynta noocan oo kale ah waxay si siman u socotaa iyada oo aan la hirgelin, kuwaas oo si xun u saameeya horumarinta dhammaan dalagyada;
Dayrka wanaagsan ee ay bixiso saqafka dillaaca.
Ka dib oo dhan, xitaa polycarbonate la sameeyey iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada casriga ah ee ugu casriyeynaya waxa loo yaqaan "faa'iido leh" ee iftiinka qorraxda, ka leexinta carrada iyo dhirta qaybaha muhiimka ah ee horumarka;
Iskudhafyada waa sahlan oo si caddaalad ahna u dhaqsiya si ay isugu xiraan una rakibaan., laakiin waxay qaadataa daqiiqado yar oo keliya si aad uga saarto ama dib u dhigto saqafka.
Inkastoo xaqiiqda ah in aqalka dhirta lagu koriyo, ujeedada ugu weyn, waxay bixisaa ilaalinta ugu badan ee khudaarta, ubax iyo dhirta hoosta ka soocaysa waxyaabo aan caadi aheyn (xaaladaha cimilada inta badan). Taasi waa sababta aqalka dhirta lagu koriyo ee saqafka la dhigo xilliga qaboobaha waa mid aad u muhiim ah.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la qaado daryeel dheeraad ah si loo abuuro gudaha. shuruudaha wanaagsan ee sii kordhaya kuwa ama dalagyada kale. Doorka muhiimka ah ee tan ayaa lagu ciyaari karaa meesha saxda ah ee lagu koriyo.
First of all, waxaad u baahan tahay inaad doorato meel ka mid ah qorshaha noqon doonaa si fiican u iftiimay wakhti dheer, taas oo ah natiijo badan oo qorraxda qorraxda ku dhici doonta gudaha dhismaha. Waa suurad wacan in dusha sare ee goobta uu ahaa mid sahlan oo aan xitaa aan hoos marin jilicsan.
Doorashada meel ka hooseysa aqalka dhirta lagu koriyo, sidoo kale ha ilaawin in ay ku ma aha inay hoos u dhacaan geedaha dhaadheer iyo dhismayaasha ku dhow, sidaas darteed aaggu waa inuu u furan yahay sida ugu macquulsan.
Iyo shuruudda ugu muhiimsan ee lagu doorto goobta - waxba ma aha inay ka hortagaan raritaanka degdegga ah iyo soo celinta saqafka.
Caadi ahaan, koriyo-dhaqameedyada lama isticmaalo jiilaalka. Tani waxay sabab u tahay sifooyinka muuqaalkooda.
Sidaa darteed, xaaladaha badankood, saqafka ayaa si gaar ah looga saarayaa si uusan barafku u kulmin dusha, iyo qolofada barafku ma sameysna. Intaa waxaa dheer, waxay u ogolaataa dhisaan cadaadiska laysku daro derbiyada dhismaha labada dhinacba, taas oo si weyn u yaraynaysa khatarta burburkeeda. Si kastaba ha noqotee, meelaha kulul ee beeraha waxaa mararka qaarkood lagu shaqeeyaa xilliga qaboobaha.
Intaas waxaa dheer, waa inaad horay u sii go'aamisid nooca aqalka dhirta lagu koriyo ah ee dabiiciga ah leh - dabaysha, dhejinta ama la qaadi karo.
Doorashada ugu wanaagsan waxaa loo tixgeliyaa aqalka dhirta lagu koriyo. Si kastaba ha ahaatee, geedo isku dhafan oo la dhejiyey ayaa lagu kala sooci karaa hal muhiima oo muhiim ah, taas oo ah haddii ay lagama maarmaan tahay, dhismaha waa la burburin karaa oo lagu qarin karaa meel kasta oo haboon ama isbeddeleysa meesha ayada oo aan la gelin dadaal badan.
Si kastaba ha ahaatee, garoonada noocan oo kale ah waxay leeyihiin aasaas (badiyaa xarfaha sawir qaadista), taas oo dhab ahaantii, waxay u keentaa in badan Diidmada sare ee culeyska sareiyo sidoo kale xaaladaha cimilada.
Heerka xiga ee shaqada diyaarinta waa in la go'aamiyo xuduudaha aqalka dhirta mustaqbalka. Cabbirkiisu waa inuu u dhigmaa nooca dhirta oo lagu kori doono.
Xuduudaha ugu fiican waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin 2 mitir sare iyo 10 mitir ballaaran.. Noocyada noocan oo kale ah waxaa lagu gartaa faraca oo waxay ku fiican yihiin qajaarka sii kordhaya ama ay duurka u koraan, iyo geedo geedo waaweyn oo geedo waaweyn ah.
Markaas waxaad u baahan tahay inaad sameysid sawir ah aqalka dhirta lagu koriyo. Qorshahan, dhammaan faahfaahinta dhismaha waa in la calaamadeeyaa, laga bilaabo albaabka oo la xiraa hawo yar oo hawo leh.
Sawirku wuxuu muujinayaa aqalka dhirta lagu koriyo oo saqafka lagu riixo.
Qolka saqafka leh saqafka la jari karo waa adiga
Maanta kala sooc dhawr nooc oo naqshado dhirta lagu koriyo ahKu rakibay saqafka la kala qaadi karo:
Saqafka la qaadi karo oo la qaadi karo;
Xaaladda aqalka dhirta lagu koriyo;
Iskuuleyn kulul oo lagu baddeli karo;
Dhawaan, waxa loogu yeero beeraha lagu beddeli karo. Baaxadooda waxay u sabab tahay qalab aad u fudud oo loo isticmaalo tiknoolajiyada.
Buulka aqalka dhirta lagu furo waa furan oo leh qalab daaqado gaar ah. Xaaladdan, saqafku uma baahna in la saaro - waxay ka dhaqaaqaysaa oo keliya dhinacyada.
In xilli diiran, habka noocan oo kale ah waxaa loo isticmaalaa sida aaladda caadiga ah, iyo qabow - hubisaa in barafka barafka gudaha ee dhulka. Sidaas, ka dib markii beergooyska dhammaato, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad u dhaqaaqdo qayb ka mid ah saqafka aqalka dhirta lagu koriyo.
Waa in la ogaadaa in naqshadaha noocan oo kale ah ay bixiyaan joogitaanka laba qaybood, mid kasta oo aad ka abuuri karto shuruudaha kala duwan ee khudradda iyo dhirta kale.
Intaa waxa dheer, waxaad ku siin kartaa doorbidid qaybta labaad ee naqshadeynta, kaas oo xaashida mitirka polycarbonate la geynayo.
Si aad u dhisto aqalka dhirta lagu koriyo oo kor looxiyo, waa inaad sameysaa talaabooyinka soo socda:
dooro meel lagu koriyo;
diyaariso aasaaska. Sida caadiga ah, waxay noqotaa caan ah waxayna ka buuxsantaa mid la taaban karo. Si kastaba ha noqotee, waxaad si fudud u saari kartaa maqaarka alwaaxda ku wareegsan wareegga wareegga, horay loo daaweeyay antiseptics gaar ah. Baaxadda aasaaska ee dhismayaasha waaweyn waa in ay ka weyn tahay kuwa yar;
derbiyada ayaa la dhigaa. Nidaamkan waxaa lagu fuliyaa mabda'a isku mid ah sida noocyada kale ee lagu koriyo;
rakibaadda saqafka. Qeybta sare, profile leh grooves waxaa lagu dhajiyay mitir kasta, kaas oo galka polycarbonate ka dibna la geliyo;
waa lagama maarmaan in la hagaajiyo dhinacyada xadhkaha gaarka ah si looga hortago in saqafka ka soo galo dhinaca;
at dhinacyada kala duwan ee aqalka dhirta lagu koriyo dhig laba marin iyo hal albaab.
Milkiilayaal badan oo noocan ah ee codka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ku habboon soo saarka dalagyada beeraha. Si kastaba ha noqotee, dhismayaasha noocaas ahi waxay leeyihiin faa'iido darro - seerfudud liita, oo mararka qaar aaney dhirta ka badbaadin roobab culus.
Waxyaabaha noocan oo kale ah ee lagu koriyo iyo lagu koriyo ayaa gacanta lagu soo saari karaa, akhriya qoraalada boggayaga internetka ah: dukumiinti, polycarbonate, daaqadaha daaqada, hal darbi, koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo ee filimka, aqalka dhirta lagu koriyo (polycarbonate), mini-sera, PVC iyo tubooyinka , laga bilaabo daaqadaha hore ee daaqada, dhirta lagu koriyo, barafka, barafka jiilaalka.